Freedom of Association – CTUM
IndustriALL Textile, Garment, Shoes and Leather Steering Committee Meeting
IndustriALL Textile, Garment, Shoes and Leather Steering Committee Meeting. (20-Nov, 2019), Geneva, Switzerland. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် IndustriALL တွင် ပါဝင်သည့် ချည်မျှင် အထည်အလိပ်၊ ဖိနပ်နှင့် သားရေ ကဏ္ဍ၏ ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ […]
Round Table Discussion on Freedom of Association and Social Dialogue in the Global Textile, Garment and Shoes Sector on 15th Nov, 2019. Representatives from IndustriALL, Brands, […]
Raising awareness on FOA guide line
IWFM Member Meeting on review of IWFM dispute settlement policies and raising awareness on FOA guide line. (7-11-2019) မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့် စက်မှုလက်မှု အလုပ်သမားများ အဖွဲ့ချုပ် IWFM ၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းဝေးကို ယနေ့ […]
Published by ctum at April 3, 2017
Discussion between ILO-Japan Team and the CTUM
Discussion between ILO-Japan Team and the CTUM. ILO-ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် CTUM ကိုယ်စားလှယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှု။ CTUM လှုပ်ရှားမှု များကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ (၁၉။ ၃။ ၂၀၁၇)